Awardzee: Maitiro Ekuwana Mubairo Pamhepo | Martech Zone
China, Kurume 9, 2017 China, Kurume 16, 2017 Douglas Karr
Makambani ehukama neruzhinji anogara akatarisa kuti avake ruzivo uye vawane mukurumbira kune vatengi vavo. Imwe nzira huru ndeyekuti mubairo wekutumira. Mipiro ine zvakwakanakira zvakati wandei pane yako avhareji yemutengi pombi:
Mipiro inopa huru nhau fodhi yePR nyanzvi kuti pitch nhau uye zvivakwa.
Mepu saiti uye zvinoratidzwa zvinowanzo shanyirwa nepamusoro Zvakakodzera vateereri, kuwedzera kusvika kwako.
Mepu saiti kazhinji dzinoshandisa vatongi vakanyanya zvine simba, saka kutora zita rako pamberi pavo kunonakidza.
Makomborero kuvimba uye masimba masimba iyo iwe yaunogona kugovana nekusimudzira pane yako wega saiti uye yemagariro chiteshi.
Dambudziko, hongu, riri kuyedza tsvaga mibairo yemubairo usati waverenga nezvekukunda kwemukwikwidzi wako mupepanhau remuno kana kuburitswa pamhepo pamhepo. Pinda Awardzee, yakazara database yemubairo pamhepo.
Makore mashoma apfuura pandanga ndichishanda muPR, ndakapihwa basa rekutsvaga vamwe vatengi mibairo yekambani. Raive basa rinotyisa kuve neGoogle yakanakisa kambani mibairo kwemaawa nemaawa… uye maawa nemaawa. Saka mwedzi mishoma yapfuura, shamwari yangu yakanaka neni takatanga dhatabhesi kuti maitiro aya ave nyore. Kunyangwe iwe uri mukutengesa, PR, muridzi webhizinesi, kutaurirana, HR - tinovimba ino saiti ichaita kuti hupenyu hwako huve nyore. Nick Pennebaker, Co-muvambi
Awardzee inobvumidza iwe kuti uite kutsvaga kwemavara kwemubairo pamwe nesefa nedunhu uye chikamu. Chinongedzo kumubairo, musangano, uye chikamu uye dunhu zvinopihwa mumhedzisiro.
Dai ini ndaive nechishuwo chimwe, zvaizovewo kuve neyekumhanya dhaidhi yemubairo - zvingave zvakanaka kungoona chete mibairo yaivepo yekutumirwa mumazuva makumi matatu anotevera pane kuona mubairo wese kunze uko. Asi hei - iyi imwe heck yekutanga kukuru. Kutenda kuna Nick nekushanda nesimba!
Hat muromo kune James Hahn II yekuunza Awardzee kwandiri!
Tags: Awardawards databaseawardzeetsvaga mibairotsvaga mibairo onlineNick pennebakerprhukama hwevanhu